ဝန်းထမ်းလစာနဲ့ အကြွေ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ၀န်းထမ်းလစာနဲ့ အကြွေ
Posted by panpan on Aug 1, 2011 in Creative Writing, Money & Finance, News | 25 comments
လစာကို အကြွေထည့်ပေးခြင်း ငွေအကြွေ၃၅၀၀၀ဖိုး
ဇူလိုင်လကုန်ကစပြီး အစိုးရ၀န်ထမ်းတွေကို လစာထုတ်ပေးတာ အကြွေတွေထည့်ပေးနေပါတယ်
၂၀၀တန်အရွက်တစ်ရာ၊ ၁၀၀တန်အရွက်တစ်ရာ၊ ၅၀တန်အရွက်တစ်ရာ၊ စုစုပေါင်း ၃၅၀၀၀ဖိုးပါ
ပိုက်ဆံတွေက အသစ်စက်စက်တွေ၊ ဘဏ်အုပ်၊ နံပါတ်စဉ်တိုင်းရတာပါ
ဒါပေမယ့် ၀န်ထမ်းတိုင်းတော့ ငွေအကြွေရတာမဟုတ်ဘူး
အရင်က လုပ်ငန်းရှင်သူဌေးတွေကပဲ ဘဏ်မှာငွေအကြွေတွေလဲကြပါတယ်
ပြီးတော့ အကျိုးမဲ့ထုတ်မသုံးကြပါဘူး (သိမ်းထားကြပါတယ်)
ဒီတော့ ပြည်သူတွေလက်ထဲကို ငွေအကြွေတွေက မရောက်တော့ဘဲ အစုတ်အပြဲတောင် အနိုင်နိုင်ဖြစ်ခဲ့ရတာပါ
ဒါ့ကြောင့် ၀န်ထမ်းတွေကို လစာပေးတဲ့အခါ ငွေအကြွေထည့်ပေးတာပါ
၀န်းထမ်းတွေအနေနဲ့ ဒီငွေကို မသုံးမဖြစ် သုံးကြမှာဖြစ်လို့ ပြည်သူလူထုကြားထဲကို သေချာပေါက်ပြန့်နှံ့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်
ဘဏ်မှာ ချက်လက်မှတ်နဲ့ လစာငွေထုတ်မယ့် ၀န်ထမ်းတွေအတွက် မရပေမယ့် (အကောင်းဘက်ကကြည့်မြင်ပြီး) ခုလောက်လုပ်ပေးတာတော့ မဆိုးဘူးပြောရမယ်
ဒီတစ်လပြီး နောက်လတွေလည်း ခုလိုဆက်လုပ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင် အကြွေပြဿနာ အတော်လေးထိထိရောက်ရောက် ဖြေရှင်းနိုင်မှာပါ
ပြီးတော့ အကြွေ၈၀ကို ၁၀၀နှုန်းနဲ့ စီးပွားဖြစ် ငွေအကြွေလဲလှယ်သူများလည်း ပပျောက်သွားနိုင်သလို ဘဏ်ဝန်ထမ်းများ လာဘ်စားမှုများလည်း နည်းသွားမှာပါလို့ ထင်မြင်မိပါတယ်
(ချက်လက်မှတ်နဲ့ လစာထုတ်မယ့် ၀န်ထမ်းတွေကို ဘဏ်က အကြွေထုတ်ပေးမလုပ်ပေးတာက ဘာအခက်အခဲကြောင့်များဖြစ်နိုင်မလဲ၊ ကျွန်မလည်း ဥာဏ်မှီသလောက် စဉ်းစားကြည့်ပါတယ်၊ ရွာသူရွာသားအပေါင်းလည်း စဉ်းစားပေးကြပါ)
ဇူလိုင်လကုန်မှာ ကျွန်တော်တို့တော့ ထုတ်မရလိုက်ပါဘူးဗျာ..။
ဟုတ်လား၊ တချို့ဝန်ထမ်းတွေတော့ ရလိုက်တယ်
အကြွှေတွေ ပြည်သူတွေ လက်ထဲ ရောက်တာပေါ.ဗျာ
တစ်ချို.က မယူချင်ကြဘူးလို. ကြားနေရတယ်နော်
မယူချင်တဲ့လူတွေက ယူချင်တဲ့လူတွေကို ငွေလဲပေးလိုက်တာပေ့ါ
အိမ်မှာတောင် အကြွေရထားတဲ့ဝန်ထမ်းဆီက ၃၅၀၀၀ဖိုးလဲထားတယ်
နွယ်ပင်လဲ ယောက္ခမကြီးဆီက လဲထားလိုက်တယ် အပိုတော့ မပေးရပါဘူး
ဝန်ထမ်း တိုင်း မရဘူး ဆိုတဲ့ ကိစ္စ မှာ
အစိုးရ က ဒီလို ထုတ်ပေးဖို့ အမိန့် စာ ထွက်ရှိပြီး ပြီ ဆိုပေသော်ငြား
ငွေကိုင် ဌာန က ဝန်ထမ်း များ က ၊ တမင်သက်သက်
ကြားပေါက် ရှာနေကြလို့ ဖြစ်နိုင်တယ် လို့ 
စီမံအုပ်ချုပ်ရေး administrative အခက်အခဲပေါ့ကွယ်။ နဂိုထဲက ချက်နဲ့ထုတ်ပါတယ်ဆိုမှ ကက်ရ်ှတဝက် ချက်တဝက်ပေးရရင် မနိုင်မနင်းဖြစ်၊ ရှုပ်ထွေးမှုတွေ ဖြစ်ကုန်နိုင်တာပေါ့။ ငွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်ဆိုတော့ ပိုကြောက်မှာပေါ့လေ…။ အမှားအယွင်းတခုဖြစ်ရင် ပန်ပန်လျော်ပေးမလား…။
ဘဏ်မှာ လစာသွားထုတ်တဲ့အချိန် ဥပမာ-တစ်သိန်းလစာရသူကို ၃၅၀၀၀အကြွေပေးပြီး ကျန်တာ အတန်ကြီးပေးတာမျိုးဆို အဆင်ပြေမလားလို့ပါ၊ သေချာစဉ်းစားကြည့်တော့လည်း မလွယ်ဘူးနော်၊ ရတဲ့လစာကို အကုန်ထုတ်ချင်တဲ့လူရှိချင်မှရှိမယ်၊ ဒါပေမယ့် ငွေဘယ်လောက်ပဲချန်ထားချန်ထား အတိုးမရဘူးဆိုပဲ
အခုတောင်မကောင်းတတ်လို့ မဖြစ်မနေ လုပ်ပေးထားတာမဟုတ်လား?
စဉ်းစားကြည့်လေ… စက္ကူတရွက်ချင်း အတူတူ ၁၀၀ လုပ်မလား?
နဂိုထဲက စေတနာ မရှိတဲ့အထဲ… ဘယ်အနစ်နာခံပါ့မလဲ….။
လုပ်ပေးတယ် ဆိုတဲ့ နာမယ်လေး ရယုံလောက်ပေါ့။
၃ လ တစ်ကြိမ် ထုတ်ပေးမယ်လို့ ကြားတာပဲ …
ချက်လက်မှတ်နဲ့ထုတ်တဲ့သူတွေကို မိမိတို့ဌာနအတွင်းက ငွေစာရင်းဌာနတွေမှာ ငွေအကြွေနဲ့ ပြန်လဲပေးပါတယ် …
အကြွေပေါပြီပေါပြီနဲ့ ဒီကနေ့ဆေးသွားဝယ်တာ ၈၀၀ကျတာ ၁၀၀၀တန်ပေးလိုက်တယ်
၂၀၀တန်တော့ ရှိတန်ကောင်းပါရဲ့၊ အမ်းမှာပါလေလို့ ထင်နေတာ
ခုတော့ ၁၀၀တန်တစ်ရွက်နဲ့ ကော်ဖီမစ်တစ်ထုပ်အမ်းတယ်
ကော်ဖီမစ်မယူဘူးဆိုတော့ ဟန်ဆာပလပ် ပလာစတာယူမလားတဲ့
စိတ်တိုသွားတယ်၊ ဒါနဲ့ တခြားဘာအမ်းစရာများရှိလဲလို့မေးလိုက်တော့ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေး ပါရာစီတမောရှိတယ်တဲ့၊ အဲဒါယူမလားတဲ့
ဒါနဲ့ပဲ တော်ပါပြီ ကော်ဖီမစ်ပဲယူပါတော့မယ်ဆိုပြီး ကော်ဖီထုပ်ပဲယူခဲ့လိုက်တယ်
တကယ်က အကြွေရှိရက်နဲ့ သက်သက်လုပ်ကြံတာ
ကော်ဖီမစ်ထုပ်တွေ ဗုံးလိုက်ထည့်ထားတာတွေ့လိုက်တယ် :angry
အဲဒါပဲ ပန်ပန်ရေ…. ပွတော့ ပွတယ်ဖြစ်တယ်…ဒီနေ့တောင် ၁၀၀ အမ်းရမှာ Snow Tower အမ်းလိုက်တယ်… ကိုယ်လဲ အသုံးမလိုဘဲ ဒါမျိုးအမ်းတာတွေ ယူနေရတာ ..တစ်လတစ်လ ပေါင်းလိုက်ရင် မနည်းဘူး.. ကိုယ့်ချွေးနည်းစာလေးတွေ အလဟသ ပြုန်းတီးကုန်တယ်…:(
ဘာမှမရတာထက်စာရင် ရတာလောက်ကိုဘဲ ကျေနပ်စွာလက်ခံလိုက်မယ်ဆိုရင်
ယနေ့ခေတ် မြန်မာပြည်မှာ ငွေအကြွေ ရှားပါးတာဟာ ပြဿနာ တစ်ပါးပါပဲ။ အခုလို ဝန်ထမ်းတွေကို ငွေအကြွေ ထုတ်ပေးတယ်ဆိုတော့ မဆိုးဘူးပေါ့ဗျာ။
ွှအကြွေက လိုတော့လိုပါတယ် …နည်းနည်းပဲလိုချင်တာ .. လခရတဲ့လူတွေ အကုန်လုံးသာ တစ်ရာတန်နဲ့လဲပေးမယ်ဆိုလျှင် ကျွတ်ကျွတ်အိတ်နဲ့ လစာထုတ်ရလိမ့်မယ် … ။
မှန်ကန်ထိရောက်တဲ့ နည်းဗျူဟာမို့ ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။
မင်္ဂလာ သတင်းပါ ကောင်းမှု့ကို ရှေ့ဆောင်တဲ့အတွက် မင်္ဂလာရှိပါတယ်။
ကျွန်တော်တင်တဲ့ ကျလဲကျပ ထဲက ပန်းဆိုးတန်းကူးတို့ဆိပ်ခက ခု August 1st ကစလို့ တစ်ယောက်ကို တစ်ဆယ်မဟုတ်တော့ဘူး။
တစ်ယောကို ငါးဆယ်ကျပ်ဖြစ်သွားပြီ။ တရားဝင် ဘုတ်ထောင်ထားတယ်။
ပြန်မအမ်းတာနဲ့ စာရင် တရားဝင်ယူတော့ နဲနဲခံစားရသက်သာတာပေါ့ဗျာ။
ဒါပေမဲ့ စကြီန်လမ်းက ၀န်ထမ်းလို လူတွေကတော့ လက်မှတ်မပေးပဲ မအမ်းပဲ ယူနေတုန်းပါပဲ။
ဘီအမ်တွေ၊ ဟိုင်းလတ်၊ ဘိုက်ပူချက်ကြီး၊ ဒိုင်နာကားတွေ စီးနေရရင်းနဲ့ အဲယားကွန်းဘတ်စ်ဆိုတာ ပေါ်လာရော
တစ်ယောက်၂၀နဲ့၊ ဆိုဖာခုံအကောင်းစား အသစ်တွေ၊ တံခါးပေါက်ကလည်း လိုက်ကာတွေတောင်တပ်ထားလို့၊ လူကလည်း ချောင်လိုက်တာ ထိုင်စရာနေရာပေါလို့
အဲသည်ကမှ အဲယားကွန်းက ဘယ်ရောက်လို့ရောက်မှန်းမသိ၊ ပုံမှန်လိုင်းကားအဆင့်ဖြစ်ရော (ကားခဈေးတက်တာပဲ အဖတ်တင်သွားတယ်)
နောက်တခါ ခုပေါ်ပင်ဖြစ်နေတဲ့ အဲယားကွန်းကား၊ ၂၀၀တန်အထူးကားတွေ၊ အဲယားကွန်းမဖွင့်ရင် တိုင်ကြားနိုင်သည်..ဘာညာ၊ လက်မှတ်မပေးရင် ဘာညာ၊ လူပိုမတင်ရ၊ မှတ်တိုင်မှာအကြာကြီးမရပ်ရ၊ ဘာညာ…..။
အထူးကား ၂၀၀ကျပ်၊ အတူတူပဲ
ပုံမှန်ကားခ ၂၀၀ဖြစ်သွားတာပဲ အဖတ်တင်တယ်
ကျွန်မတို့ လက်ထဲမှာရှိတဲ့ ၂၀၀ တန် ၁၀၀တန်တွေကအစုတ်အပြဲတွေပါ။တချို့ဆိုတိပ်တွေနဲ့ ကပ်၊ကော်နဲ့ ကပ်အမျိုးမျိုးပေါ့။၂၀၀တန်မှာထောင့်ကပြဲနေလို့ နှစ်ဆယ်တန် နဲ့ရောကပ်ထားရတာတွေကြုံနေကြပါ။ကပ်ရာ ခွာရာ မပါရင်တောင် အတုလို့ ထင်ခံနေသေးတယ်နော် ။စိတ်ကုန်လာပီ
အကြွေတွေ တကယ် ထုတ်ပေးနေတော့ အဟောင်း တွေ လျော့ပါးသွားမယ် ထင်ပါတယ်။
ဒီရက်ပိုင်းမှ ဘဏ်က ထုတ်လာတဲ့ ၅၀၀ တန် အစုပ်ကို နောက် ဘဏ်တခုက မယူလို့ လဲပေးခဲ့ရတာလည်း ရှိသေးတယ်။ သိပ်တော့ မကျေနပ်ဘူး။
အသစ်(ခပ်လတ်လတ်)လေးတွေလည်း သိပ်တော့ မပေါသေးဘူး
ဆိုင်တွေမှာ ကော်ဖီမစ်၊ တစ်ရှုးတွေ အမ်းနေတုန်း
ကြည့်ရတာ အရင်လက်ကျန်တွေကုန်အောင် ထုတ်အမ်းနေတာလားမသိဘူး